ပန်ဒိုရာ: ပြည်သူတို့အတွက် ကဗျာဆရာရဲ့ တေးသံ
အင်းး တကယ်ပါပဲ... ကြည့်လိုက်ရင် ကဗျာဆရာက ရက်စက်လိုက်လေခြင်း.. ။ ဒါပေမဲ့ အခါများစွာမှာ အမှန်တရားက ရက်စက်ခါးသည်းစမြဲ..။
ပေါက်တူး ပေါက်ပြား တူရွင်းတွေနဲ့
ရက်ကန်းစင်တွေနဲ့ ကိုယ့်မသာဝတ်စုံ ကိုယ်ရက်လုပ်လိုက်ပေါ့
အင်္ဂလန်ကလည်း သင်တို့ရဲ့သင်္ချိုင်းမြေ ဖြစ်လာတော့မပေါ့..။"
ကဲ.. အဲဒီအပိုဒ်ကို ကြက်သီးထ သဘောကျမိတဲ့ ကိုယ်ကရော ရက်စက်နေပလား...။ မတတ်နိုင်ပါ..။
အခါများစွာမှာ အမှန်တရားဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းတတ်မြဲပါ..။
ဒါကဗျာ လက်နက်အစစ်ပေါ့ ပန်ပန်ရေ..
လူထုအတွက် တော်လှန်ကဗျာ ဆိုတာ အမှန်ရှိခဲ့ပါ့။
အဖိုး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ကိုသတိရမိစေတဲ့ကဗျာကလေးပ..
ကိုယ့်လူမျိုးချင်း အဖိနှိပ်ခံ၊ဂုပ်သွေးအစုပ်ခံနေရတဲ့ မလွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူတွေဘ၀ကို မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ တော်လှန်ကဗျာကောင်းကလေးပ။
“မျိုးစေ့ကိုချပါ၊ အာဏာရှင်ကိုတော့ မရိပ်သိမ်းခိုင်းမိစေနဲ “့ …လို့`က’ နေရာမှာ `က’ို လို့ ဆိုရင် ကောင်းမလားလို့ (တတ်သလိုလိုနဲ့အသေးအမွှားလေးကို ၀င်လျှာရှည် လိုက်ဦးမယ်)
မူရင်းအတွက်ရော ဘာသာ ပြန်အတွက်ပါအသိအမှတ်ပြုကျေးဇူးပါ။
ပန်ပန့်ရဲ့ ဘာသာပြန်စကားလုံးများကလဲကျစ်လျစ်လှပပါပေတယ်။
အမမေငြိမ်းရေ ဟုတ်တယ် အမှန်တရားက ရှိနေ.. မြင်နေတာကို ပြောတဲ့လူကတော့ ပြောပြမှာပဲ
ကိုမောင်ရင် အကြံပေးတာ ကျေးဇူး အဲလို ပြင်လိုက်ပြီဗျို့.။
ကဗျာရဲ့ ကြီးမြတ်လေးနက်မှုကြောင့် commentပေးရမှာတောင် လက်တွန့်သွားတယ်ပန်ရေ။ မူရင်းကဗျာဆရာရော၊ ဘာသာပြန်ကဗျာဆရာမနှစ်ဦးလုံးကို လေးစားလျှက်။
ကျွန်တော်လည်း ရှယ်လီရဲ့ ကဗျာတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်ဗျ ..။
ရှယ်လီ ရဲ့ မြေးလေး..ပန်ဒိုရာ ရေ..း)
ခက်တာက.. လုပ်သား ပျား တွေ ခမျာ.. သူတို့ဘာလုပ် နေ မှန်း..သူတို့ဖာသာ တောင် သိရဲ့လား..
ကြာညောင်းတဲ့ ခေတ်ကာလ တခု ( ပျားအုံနိုင်ငံရေး ) ထဲမှာ..ဒါကိုနားလည်မဲ့..လုပ်သားပျား တွေက..သိပ်နည်းပါ လိမ့်မယ်လေ..
အေး..ရှယ်လီ ကိုသိတဲ့..ပျားအုပ်တအုပ် လောက် ..ပျံသန်း ရောက်ရှိ ခွင့် ရမယ် ဆို ရင်တော့..ဒီပျားအုံ ထဲက.. အချောင်သမား ပျားယုတ် တွေကို ..မီးခိုးမှုတ် ..မောင်းထုတ် ခွင့် ရ နိုင် ပါ လိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း.. ပျားအုံ တခု လုံး..အဖွတ် ခံ လိုက် ရ ရင်တော့..
ပျားရည် သောက် ရ တာပေါ့..း)
"If there is hope, wrote Winston, it lies in the proles.
But the proles, if only they could somehow become conscious of their own strength, would have no need to conspire. They needed only to rise up and shake themselves likeahorse shaking off flies. If they chose they could blow the Party to pieces tomorrow morning. Surely sooner or later it must occur to them to do it? And yet-! "